Onye na-eme mkpọtụ
ZG jijiji feeder
K usoro reciprocating coal feeder
HGM usoro ọrụ vibration coal feeder
Nka vibration feeder akpa
Czg okpukpu abụọ uka jiji feeder
CypB ọnụ ọgụgụ diski feeder
CZS usoro tụgharịa eruba ihuenyo
Ezubere efere ihuenyo na ihe pụrụ iche ma nwee ogologo ndụ ọrụ; ọsọ ọsọ nke efere sieve bụ oge 800 / min, na ike ike nke ihe ahụ dị ka 50g; ihe ndozi nke efere sieve adịghị mkpa ọ bụla, ya mere ọ dị mfe ịkwatu na dochie.
Banana ekara vibrating ihuenyo
Czxd banana ụdị vibrating ihuenyo bụ ụdị nke onwe synchronous arọ-oru hà ọkpụrụkpụ ihuenyo, nke a na ọtụtụ-eji echetakwa nhazi nke nnukwu ihe onwunwe olu Ngwuputa na mgbakwasa ọrụ. Na ndabere nke mgbari na-adọrọ mba ọzọ elu technology, anyị ụlọ ọrụ e mere na-emepụta czxd banana ụdị vibrating ihuenyo.
GPS usoro elu ugboro vibration dewatering ihuenyo
Iji gboo mkpa nke slime mgbake na ezi ihe dewatering na nhazi ọkwa, na iji nweta nzube nke nnukwu nhazi ikike, ezi dewatering mmetụta na ike ime mgbanwe, elu ugboro na elu vibration ike n'ibu e ji mara.
Igwe usoro GT usoro
GT - usoro drum ihuenyo bụ a pụrụ iche echetakwa akụrụngwa mepụtara anyị factory maka nkà mmụta banyere ígwè, chemical ụlọ ọrụ, ụlọ ihe, Ngwuputa na ndị ọzọ ọrụ. Ọ na - emeri nsogbu nke mkpọchi ihuenyo mgbe ị na - enyocha ihe mgbochi mmiri site na ntanetị na ntanetị na ntanetị, na - eme ka mmepụta na ntụkwasị obi nke sistemụ nyocha dịwanye mma, ma bụrụkwa nke ọtụtụ ndị ọrụ na - eto.
HFS usoro fatịlaịza
HFS fatịlaịza fatịlaịza bụ ụdị ihuenyo ọhụụ. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịkọ nri fatịlaịza dị iche iche na ihe ndị ọzọ na-emepụta kemịkal. HFS ụdị kemịkalụ fatịlaịza na-enyocha igwe webatara American "terakot" usoro na teknụzụ ọhụụ nke mgbanaka uzo rivet. Low vibration mkpọtụ, elu echetakwa arụmọrụ na-adaba adaba mmezi.
SZR usoro ọkụ ore vibrating ihuenyo
SZR usoro ọkụ ore vibrating ihuenyo na-bụ-eji maka nhazi ọkwa nke ọkara na obere size sinter ore na okpomọkụ nke 600-800oc na Metallurgical ụlọ ọrụ, na mezue edo nkesa na obi jụrụ akụrụngwa.
Ihuenyo na elu vibrating
Igwe ihuenyo elu na ntanetị dị ala bụ ihe ndị ahịa anyị chọrọ. A haziri ma mepụta ihuenyo vibrating site na iji njirimara gbasara ohere.
Ọganihu vibrating ihuenyo
Xbzs usoro shei ogwe aka vibrating ihuenyo bụ ụdị ọhụrụ nke nyocha ngwa. A na-ejikarị ya eme ihe maka nyocha n'okpuru ebe a na-ere ọkụ ọkụ ma dabara adaba maka nnukwu ihe, ọkara na obere granular.
ZDS usoro elliptical hà ọkpụrụkpụ ihuenyo
Elliptical hà ọkpụrụkpụ ihuenyo na-eji maka ore nhazi ọkwa nke sinter, sinter pellet na Ngwuputa ụlọ ọrụ na nkà mmụta ọgwụ ụlọ ọrụ, na nhazi ọkwa na screening ọrụ na coal ụlọ ọrụ. Tụnyere ndị ọzọ ụdị sieving igwe nke otu nkọwa, ike nhazi bụ ibu na-echepụta arụmọrụ ka elu.
Ya (k) usoro nnukwu gburugburu ihuenyo vibrating
Ya (k) usoro nnukwu-ọnụ ọgụgụ okirikiri vibrating ihuenyo bụ a nnukwu-ọnụ ọgụgụ echetakwa akụrụngwa mepụtara maka Ngwuputa ụlọ ọrụ. Odabara ka ihe eji eme otutu ihe. Ọ nwere njirimara nke nnukwu nhazi ikike, arụmọrụ nyocha dị elu, ike siri ike na ndozi dị mma.
ZK usoro linear vibrating ihuenyo
A na-ejikarị Linear vibrating na-eme ihe iji kesaa na coal na Ngwuputa, Ngwuputa, ihe owuwu ihe, ụlọ ọrụ eletriki na kemịkalụ, usoro ngebichi na-agbaso ihe ndị a na-ahụkarị nke ọma na mkpọchi mkpọchi, yana usoro dị mfe, nke siri ike ma na-adịgide adịgide, obere mkpọtụ, ntinye ngwa ngwa na mmezi, wdg.
Ihuenyo ZSG Linear
ZSG usoro linear vibrating ihuenyo bụ ọhụrụ na oru oma echetakwa akụrụngwa, nke nwere njirimara nke elu arụmọrụ, ala eyi, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ, mmetọ mgbochi, aku na uba mma, ike ịzọpụta na mara mma anya. A na-ejikarị ya arụ ọrụ nyocha nke nnukwu, ọkara na obere ahụ na ntinye, nkà mmụta banyere ígwè, kol, ụlọ ọrụ kemịkal, ike ọkụ, ihe ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
1234 Osote> >> Peeji 1/4
Adreesị: Akụkụ ọdịda anyanwụ nke okporo ụzọ ugwu ugwu nke Taihang, mpaghara mmepe akụ na ụba Xiaoji, xinxiang obodo, ógbè henan.